दिल्लीले पञ्जावसँग खेल्दै, सन्दिप पर्लान त टिममा ? - Nepal Cricket
दिल्लीले पञ्जावसँग खेल्दै, सन्दिप पर्लान त टिममा ?
इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आईपीएल अन्र्तगत आज एउटा मात्रै खेल हुने भएको छ । नेपाली समय अनुसार राति सवा ८ बजे शुरुहुने खेलमा किंग्स इलाभेन पञ्जाब र दिल्ली क्यापिटल्स भिड्दै छन् ।
दुवै टिमको यो चौथो खेल हो । दिल्लीले अहिलेसम्म तीन मध्य २ खेलमा जित र एक खेलमा हार ब्यहोरेको छ । ४ अंक जोडेको दिल्ली दोस्रो स्थानमा रहेको छ । पञ्जाबले पनि ३ खेल मध्ये २ मा जित र एकमा हार व्यहोरर्दै ४ अंकनै बनाए पनि रन रेटका आधारमा चौथो स्थानमा रहेको छ ।
आइपीएलमा दिल्ली र पञ्जाब अहिलेसम्म २२ पटक भिडेका छन् । जसमा दिल्ली ९ र पञ्जाबले १३ पटक जितको स्वाद चाखेका छन् । आज हुन लागेको मोहाली मैदानमा यी दुई टिमका बीचमा ६ वटा खेल भएकामा अहिलेसम्म दिल्लीले एक पटक मात्रै पञ्जाबलाई हराएको छ । दिल्लीले १३ मार्च २०१० मा पञ्जाबलाई पराजित गरेको थियो त्यस यता बाँकी चार खेलमा दिल्ली सधैं पराजित हुँदै आएको छ ।
रविचन्द्र आश्विनको कप्तानीमा रहेको पञ्जाबले पछिल्लो खेलमा मुम्बई इण्डियन्सलाई सहजै पराजित गरेको थियो । उक्त खेलमा ओपनर ब्याट्सम्यानले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । लोकेश राहुल नट आउट ७१ रन बनाउँदा क्रिस गेलसँग ५३ रनको साझेदारी गर्दै बलियो सुरुआत दिलाएका थिए । यसैगरी बलरहरु पनि फर्ममा देखिएका छन् ।
उता दिल्लीको टिम पनि फर्ममा आएको छ । पछिल्लो खेलको नतिजा सुपर ओभरबाट आफ्नो पक्षमा पारेको दिल्लीको मनोबल उच्च रहेको छ । दिल्लीका युवा ब्याट्सम्यान पृथ्वी शाले ९९ रन बनाएका थिए । यसका साथै शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी र ऋषभ पन्त पनि राम्रो ब्याटिङ गरिरहेका छन् ।
सुपर ओभरमा कागिसो रबाडाले कसिलो बलिङ गरेका थिए । आज पनि उनको त्यस्तै प्रर्दशन दिल्लीले अपेक्षा गरेको छ । रबाडाले सुपर ओभरमा आन्द्रे रसेलको विकेट लिएका थिए ।
यसैगरी क्रिस मोरिस, हर्षल पटेल, अमित मिश्रा र सन्दीप लामिछाने पनि उत्कृष्ट फर्ममा रहेका छन् । नेपाली युवा खेलाडी सन्दीपले पछिल्लो खेलमा प्लेयिङ ११ मा स्थान बनाएका थिए । उनले आफ्नो पुरै स्पेलमा २९ रन खर्चिएर १ विकेट लिए भने एक जनालाई रन आउट गराउन भूमिका खेलेका थिए ।